Sex « Ramkeshar’s World
New Techniques To Refresh Your Sex Life
he nice, slow lovemaking where all you do is focus on your sensations is the new mantra to renew your sex life as you rediscover each other. Sensate-focused sex exercises involveaseries of behavioral practices, which offer variety and increased personal awareness through basic touch. Virginia Johnson, sensate focus exercises involve each partner paying increased attention to their own sensations when stimulated.
2. Verbal feedback is limited unless you’re uncomfortable or in pain.
3. Do not try to elicit sexual response (but don’t sweat it if it happens).
The details of sensate focus sex make part of the book ‘ Touch Me There! A Hands-On Guide to Your Orgasmic Hot Spots , by Dr. Yvonne K. Fulbright, who isasex educator, relationship expert, columnist and founder of Sexuality Source Inc.
May 22, 2009 Posted by ramkeshar | Sex	| Leaveacomment
महिलाहरुमा पिसाब चुहिने समस्या
प्रा. डा. अर्जुनदेव भट्ट (वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट)
पिसाब चुहिने समस्या धेरै महिलामा हुन्छ । विभिन्न तथ्यांकअनुसार २० वर्षनाघेका महिलामध्ये करिब २५ प्रतिशतलाई यो समस्या देखा पर्छ । नेपाली महिलामा यो समस्या कुन स्थितिमा छ, त्यसको यकिन आंकडा छैन । तर यो समस्याले धेरै महिलाहरु ग्रस्त छन् र उनीहरुले उचित निदान र उपचारको कमीले गर्दा ठूलो सामाजिक एवम् शारीरिक कष्ट भोग्नुपरेको पाइएको छ ।
खास गरेर महिलामा हुने पिसाब चुहिने समस्यालाई महिला आफैंले र समाजले पनि खुलारुपबाट प्रकाशमा ल्याउन नहुने विषय सम्भिmनाले पनि यो समस्या झन् जटिल हुन पुगेको छ ।
पिसाब चुहिनाको कारण सधैँ एउटै हुँदैन र सबै प्रकारको पिसाब चुहिने अवस्थालाई एकै तरिकाले उपचार गर्न मिल्दैन । त्यसैले यो रोगको उपचार गर्न र्सवप्रथम यसको निदान हुनर्ुपर्छ । पिसाब चुहिने रोगको ठीक निदान गर्न पिसाब चुहिने अवस्थाबारे राम्रो विश्लेषण हुनर्ुपर्छ । सामान्यतया पिसाब नफेरेको अवस्थामा मूत्रथैलीबाट पिसाब निष्कासन नली वा मूत्रथैलीमा भएको प्वालबाट बाहिरियो भने त्यसलाई पिसाब चुहिने रोग भनिन्छ ।
पिसाब किन चुहिन सक्छ ?
मूत्रथैली एउटा ज्यादै भरपर्दो मांसपेशीले बनेको अंग हो । यसले पिसाब सञ्चय गर्ने र आवश्यकताअनुसार निष्कासन गर्ने गर्छ । जब पिसाब सञ्चय गर्ने कार्यमा मूत्रथैलीको वा त्यहाँ भएका स्नायुहरुको त्रुटिले वा मूत्र निष्कासन नलीको खराबीले पिसाब बाहिरिन पुग्छ, त्यस बेला पिसाब चुहिन्छ । मूत्रथैलीमा प्वाल परेमा पनि पिसाब चुहिन सक्छ । पिसाब विभिन्न अवस्थामा चुहिन सक्छ ।
चापसँग सम्बन्धित पिसाब चुहिने अवस्था
धेरै महिलाहरु खोक्दा, हाच्छ्यूँ गर्दा, केही भारी कुरा उठाउँदा, टुक्रुक्क बस्दा वा यौनसम्बन्ध गर्दा एक्कासि पिसाब चुहिएको अनुभव गर्छन् । जब महिलाको मूत्रथैलीको फेद तथा तल्लो पेटको समतल भाग बढी हल्लिन्छ, त्यस बेला यो समस्या देखा पर्छ । मूत्र निष्कासन नलीको मांसपेशी त्रुटिपूर्ण् भएको अवस्थामा पनि यो समस्या हुन्छ । खोक्दा, हाच्छ्यूँ गर्दा, भारी उठाउँदा वा यौनसम्बन्ध राख्दा एक्कासि पेटभित्र र मूत्रनलीभित्र चापमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले अस्थिर मांसपेशी भएको मूत्रथैली वा मूत्र निष्कासन नली हल्लिएर मूत्रद्वारको मुख खोलिदिन्छ र पिसाब चुहिन पुग्छ । करिब ५० प्रतिशत महिलामा पिसाब चुहिनाको कारण चापसँग सम्बन्धित नै हुन्छ ।
चापसँग सम्बन्धित पिसाब चुहिने अवस्थामा महिलाको मूत्रथैली पिसाबबाट पूरा भरिन पाउँदैन । पिसाबको थैलीमा थोरै पिसाब जम्मा हुनासाथ पिसाब फेर्ने इच्छा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलालाई एकदमै छिटो-छिटो पिसाब फेरिराख्ने बानी पर्न सक्छ । पिसाब चुहिएला भन्ने डरले पनि महिलालाई छिट्टै पिसाब फर्ेर्ने बानी भएको हुन सक्छ । यस किसिमको बानीले पछि गएर पिसाबथैलीमा थोरै मात्र पिसाब हुँदा पनि त्यसलाई ननिखारी नहुने इच्छा जागेर आउनेे बानी पर्छ । यस्तो अवस्थालाई पिसाब फर्ेर्ने झुट्टा प्रबल इच्छा संलक्षण (Pseudo- Urgency Syndrome ) भनिन्छ । महिलामा चापसँग सम्बन्धित पिसाब चुहिने रोग लामो समयमा जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्ने गर्छ । कुनै व्यक्तिमा कारणवश छिट्टै्र पनि विभिन्न जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्ने गर्दछ ।
पिसाब फेन प्रबल इच्छा
पिसाब फर्ेर्ने इच्छा भएपछि एक्कासि पिसाब रोक्नै नसक्ने भएर जब पिसाब चुहिन थाल्छ, यो अवस्थालाई पिसाब फेन प्रबल इच्छा सम्बन्धित मूत्र चुहावटको नाम दिइएको छ । सामान्यतया पिसाबले ज्यादै च्यापे पनि कहिलेकाहीँ पिसाब रोकेर केही समयपछि अनुकूल अवस्थामा पिसाब गरिन्छ । तर जब पिसाब फेन प्रबल इच्छासँग सम्बन्धित मूत्र चुहावट रोग हुन्छ, त्यस अवस्थामा पिसाब थाम्न जति प्रयत्न गरे पनि सम्भव हँुदैन । पिसाबको चुहावट एकदमै नियन्त्रणबाहिर पुग्छ । यस प्रकारको मूत्र चुहावटको समस्यामा पिसाब फर्ेर्ने प्रबल इच्छा यति छिटो पराकाष्ठामा पुग्छ कि च्यापेर बस्न सक्ने प्रश्नै उठ्दैन । पिसाब रोक्न नसक्ने महिलाहरुमध्ये प्रायः १० देखि ३० प्रतिशतमा यो अवस्था देखा पर्छ ।
पिसाबथैली अति क्रियाशील (Over Active ) हुनु पनि यो अवस्थाको एउटा कारण हो । यस अवस्थामा सम्पूर्ण पिसाब छ्वाल्लै चुहिने वा दुइ सामान्य पिसाब फेराइको बीचमा पटक-पटक गरेर केही मात्र पिसाब चुहिएर जाने हुन सक्छ । बढी उमेर भएका महिलामा पिसाब थैली अति क्रियाशील हुने समस्या बढी हुन्छ । व्यग्र र आतड्ढति मानसिकता हुने महिलाहरुमा पिसाब फेन प्रबल इच्छा सम्बन्धित मूत्र चुहावट देखिने सम्भावना झनै बढी हुन्छ । त्यसैले मानसिक रोग विषेशज्ञसँग पनि परामर्श गर्नुुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मस्तिष्कको रसायन बनावट र त्यसको मात्राले पनि पिसाब थैलीमा मूत्र संकलनमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने भएकाले यसतर्फपनि उपचारका क्रममा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ ।
मिश्रति पिसाब चुहिने रोग
(Mixed Urinary Incontinence ) यो अवस्थामा महिलाको चापसँग सम्बन्धित र प्रबल इच्छासँग सम्बन्धित पिसाब चुहिने रोगको मिश्रति गुण र लक्षणहरु देखा पर्छन् । पिसाब चुहिने रोग भएका ३० देखि ४० प्रतिशत महिलामा मिश्रति पिसाब चुहिने कारण देखा पर्छ । त्यसैले यस्ता बिरामीहरु पिसाब चुहिँदा चापसँग सम्बन्धित र पिसाब फर्ेर्ने प्रबल इच्छासँग सम्बन्धित दुवै कुरासँग आफ्नो अवस्था भर परेको महसुस गर्छन् । तर सामान्य अवस्थामा पिसाब चुहिएकै भरमा कुन कारणले त्यसो हुन्छ, ठम्याउन गाह्रो पर्छ । पिसाब चुहिने अवस्थाको वास्तविक कारणबारे ठीकसँग जानकारी पाउन ँयुरोडाइनामिक्स’ को अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो अवस्था केसँग बढी गाँसिएको छ, त्यसको ठोकुवा गर्न नसकिने हुन सक्छ ।
महिलामा देखिएको पिसाब चुहिने रोग मिश्रति कारणले हो भने यो अरु दुइ कारणले भन्दा बढी कडा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु यो समस्याले अति दिक्क हुन्छन् र आफ्नो जीवनलाई गुणात्मक दृष्टिले उल्लेखनीय किसिमले कम स्तरको महसुस गर्छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि उपचारको हिसाबले यस्ता महिलाले कम वा बढी उपलब्धि पाउन सक्छन् भन्ने छैन । त्यसैले सबै उपचारका विधिहरुबाट उनीहरु पनि उत्तिकै फाइदा पाउन सक्छन् भनेर उपचार अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
महिलामा पिसाब चुहिने अवस्थाको जानकारी नै किन राख्नुपर्‍यो ?
पिसाब चुहिने रोग धेरै महिलामा पाइने भएकाले यो समस्यालाई बेवास्ता गर्दा लाखौं नेपाली महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक स्थिति कमजोर हुन सक्छ । कति प्रतिशत नेपाली महिलाले पिसाब चुहिने रोगको पीडा भोगिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार विभिन्न देशमा झन्डै २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिलामा पिसाब चुहिने समस्या हुने गरेको पाइन्छ । खास गरेर बढी उमेर भएका महिलाहरुमा यो समस्याको अनुपात धरै देखिन्छ ।
पिसाब चुहिने समस्यालाई बढाउने कारणमा कडा कसरत वा गाह्रो काम पनि हुन सक्छ । महिलाहरु कडा कसरत गर्दा वा दैनिक गाह्रो काम गर्दा पनि एक्कासि पिसाब चुहिएको महसुस गर्न सक्छन् । यस प्रकारको मूत्र चुहावट महिलाले कति बच्चा पाएकी छिन्, त्यसमा पनि भर पर्छ । बढी बच्चा पाउनेहरुमध्ये धेरैलाई यो समस्या भएको पाइन्छ ।
पिसाब चुहिनुमा महिनावारी सुक्नु पनि एउटा कारण हो । तर नारी हर्मोनको प्रयोगबाट पिसाब चुहिनुमा कमी भएको भने पुष्टि हुन सकेको छैन । पिसाब चुहिनुमा ठूलो असर पार्ने अरु कारणमध्ये महिलाको शरीरको तौल हो । शरीरको उचाइसँग मेल खाने तौल भएका महिलाहरुमा पिसाब चुहिने रोग कम हुन्छ । तर शरीरको तौल बढी भएकाहरुमा पेटभित्रको चाप बढी हुने भएकाले उनीहरु पिसाब चुहिने अवस्थाबाट बढी ग्रस्त हुन्छन् । शरीरको तौल जस्तो भए पनि शल्यक्रियाबाट पाठेघर निकालेका महिलाहरु पिसाब चुहिने समस्याबाट बढी ग्रस्त हुन्छन् ।
अझै पनि कतिपयले खासगरी बच्चा पाएपछि पिसाब चुहिनु सामान्य कुरा हो भनेर लिने गरेको पाइन्छ । यो समस्याले गर्दा आफूलाई घरभित्रै सीमित राख्ने र शंकोचका कारण नातेदारलाई भेट्नसमेत जान मन नगर्नेहरु पनि छन् । यो समस्यालाई उपचारबाट पूरै निको पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरु सोच्न पनि सक्दैनन् ।
समान्यतया पिसाब चुहिने समस्याको समाधान हुन्छ । जटिल किसिमको समस्यामा पूर्ण उपचार हुन नसके पनि धेरै हदसम्म उपचार गर्न सकिन्छ । यो रोगको उपचार गर्दा रोगको कारण के हो, सोहीअनुसार उपचार विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
चाप सम्बन्धित पिसाब चुहिने अवस्थाको उपचार प्रायः शल्यक्रियाबाट गरिन्छ । यो उपचारको मुख्य उद्देश्य पिसाब थैलीको घाँटीलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्नु र क्रियाशील मूत्र निष्कासन नलीको लम्बाइ बढाउनु हो । शल्य विधि प्रायः सफल हुन्छ र बिरामीले तुरुन्त उपलब्धि अनुभव गर्न सक्छ । यो उपचारले पिसाब चुहिनेमा रोक लगाउनुको साथै महिलालाई योनि, पिसाब थैली, मूत्र निष्कासन नली र मलद्वारमाथिको मोटो आन्द्रा झरेको अवस्थाले ल्याएको असुविधाबाट पनि मुक्त गर्दछ । शारीरिक तौल बढी हुने महिलाहरुले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनु तथा तौल घटाउन अनिवार्य हुन्छ ।
पिसाब फेर्न प्रबल इच्छा सम्बन्धित मूत्र चुहावटको उपचारमा मुख्य भूमिका औषधोपचारको रहन्छ । पिसाब थैलीको मांसपेशी आकुपञ्चनरोधक औषधि (Antispasmodic), एसिटिलकोलिनबाट सक्रिय हुने वस्तु प्रतिकूल औषधि र (Anticholinergic) तीन चक्रीय आणविक संरचना भएको उदास पार्ने वस्तुविरुद्धको औषधि (Tricyclic antide- Prsssants )हरुको प्रयोगबाट धेरै महिलाहरु लाभान्वित हुन सक्छन् । वैकल्पिक चिकित्सा- आयर्ुर्वेद, योग इत्यादि पनि प्रयोग हुन सक्छ ।
मिश्रति पिसाब चुहिने रोगको उपचार पनि प्रायः मिश्रति नै हुन्छ । त्यसैले शल्यक्रियासँगै औषधि उपचारको प्रयोग आवश्यकता पर्ने गर्दछ । सामान्यतया मिश्रति कारणबाट पिसाब चुहिने बढी कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गर्छ र उपचार पनि लामो हुन सक्छ । तर उपचारबाट शतप्रतिशत फाइदा नभए पनि जति प्रतिशत उपलब्धि भयो त्यसैलाई सकारात्मक दृष्टिले हर्ेन र ध्ैय लिन तयार हुनर्ुपर्छ । त्यसपछि फेरि अरु विधि र वैकल्पिक चिकित्साको खोज गररे बढी फाइदा पाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
May 22, 2009 Posted by ramkeshar | Health, Health Tips, Sex	| Leaveacomment
यौन गोप्यताको विषय होइन
गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तै यौन पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । यौन बिना मानिस बाच्नै सक्दैन भन्ने त होइन तर यौन बिना मानिसको वंशज विकास भने हुन सक्दैन । मानिसको स्वास्थ, तन्दरुस्ती र तनाव रहित व्यवहार पनि यौनसँगै जोडिने विषयहरु हुन् । यौनप्रतिको उचित दृष्टिकोण, धारणा, बिश्लेषण र व्यवहारले मात्र समग्र विकास र सन्तुलनको निमित्त भूमिका खेल्ने भएकाले यसको चर्चा र बहस आजको वदलिदो समाज, राष्ट्र र विश्वको लागि आवश्यक छ ।
यौन गोप्यताको विषय होईन तर खुलेर बहस हुन सक्ने वातावरण हाम्रो जस्तो मुलुकमा अझै पनि बन्न सकेको छैन । यौनसम्बन्धि बहस र चर्चालाई छाडापनको रुपमा लिने हाम्रो समाजीक संस्कारले यौनको सहि विचार र व्यवहारको प्रयोगलाई संकुचित पार्ने काम गरेको छ । अझै पनि हाम्रा अविभावकहरु यौनको विषयमा हुने कुराकानी र चर्चालाई अश्लीलताको एक पाटोको रुपमा लिन्छन् । यौनप्रति आसक्त रहने आफ्नो व्यवहारको ठिक उल्टो आफ्ना सन्तानलाई यौनको विषयमा बसह गरेको नरुचाउने आम अविभावकहरुको चरित्रकै कारण पनि यौनको विषयमा जिज्ञासु रहेका कोशोर किशोरीहरु यौनको सहि विचार र व्यवहारको बारेमा बुझ्न असमर्थ हुन्छन्, जसको परिमाण स्वरुप उनीहरु असुरक्षित यौन व्यवहारतिर पनि उन्मुख हुन सक्छन् । त्यसैगरि यौनलाई नितान्न निजी र गोप्य मान्ने आम धारणाले गर्दा पनि यौन अपराध र यौन संक्रमणहरु बढीरहेका हुन् ।
विशेषगरि किशोरावस्थामा यौनको बारेमा बढी जान्ने, बुझ्ने र अनुभव बटुल्ने चाहना र इच्छाहरु हुन्छन् । यसैको कारण पनि विपरित लिङ्गीप्रतिको आकर्षण यो अवस्थामा अरु अवस्थामा भन्दा बढी हुने गरेको हो तर अपरिपक्वता र यौनको विषयमा रहेको आम धारणाको कारण सानै उमेरमा अथवा विवाह अगावै किशोर किशोरीहरुले यौनसर्म्पर्क राख्ने गरेको विभिन्न र्सर्वेक्षणहरुले देखाएका छन् र यस्ता यौन व्यवहारहरु भविष्यको योजना र यौनप्रतिको खास दृष्टिकोणबिना असुरक्षित तवरले प्राय हुने गरेका छन् । यसले देखाउछ की किशोर किशोरीहरु एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् ।
अहिले विश्वमा चुनौतीको बिषय बनेको एचआईभी र एड्स यौनप्रतिको यस्तै संकुचित धारणाको परिणाम हो । हुन त यौनसर्म्पर्कबाट मात्रै एचआईभी संक्रमण हुने होइन तर पनि हालसालैको एचआईभी संक्रमणको तथ्याङ्क हेर्दा यौन सर्म्पर्कबाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि अग्रस्थानमा छ । त्यसैले यौनको विषयमा खुलेआम बहस हुन नसक्ने हाम्रो जस्तो मूलुकको लागि यो झनै जोखिमको विषय हो । त्यसैले हामीले यौनको विषयमा बहस र चर्चा थाल्नु आवश्यक छ । सुरक्षित यौन व्यवहार के हो ? किन सानै उमेरमा यौनसर्म्पर्क राख्नु हुदैन ? यौनजन्य संक्रमण र एचआईभी संक्रमण के हो ? भन्ने बारेमा सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ र आम रुपमा यौनप्रति हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणको पनि अन्त्य आवश्यक छ । जतिवेलै यौनप्रति आसक्त रहने तर अरुले यौनको विषयमा बहस गर्दा छाडाव्यवहार ठान्ने सामाजका नाटकीय पात्रहरुहरुलाई पनि यौनको विषयमा बुझाएरसँगै लगिए यौनकै आधारमा हुने अपराधिक घटनाहरु पनि नियन्त्रणमा आउन सक्छन् ।
सामान्यत, एक जनासँग मात्र यौनसर्म्पर्क राख्ने वा कण्डमको नियमित र उचित प्रयोग गरि यौनसम्पर्क राख्नुलाई सुरक्षित यौन सम्पर्क भनिन्छ तर यसमा उमेर र आपसी सहमतिलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । सानै उमेरमा गरिने यौन सम्पर्क स्वास्थ्य र शारीरिक तथा जनेन्द्रियहरुको विकासको लागि बाधाजनक मानिन्छ भने एक जनासँगै जवरजस्ती गरिने यौन सर्म्पर्कलाई करणी वा बलत्कारको रुपमा लिइन्छ । त्यसकारण सुरक्षित यौन व्यवहार भनेको उचित उमेर (सामान्यता २० बर्ष भन्दापछिको उमेर)र आपसी सहमतिमा एक जनासँग मात्रै वा कण्डमको नियमित र उचित प्रयोग गरि गरिने यौन सर्म्पर्कलाई मान्न सकिन्छ । यौनजन्य संक्रमण भनेको महिला तथा पुरुषका यौनअङ्गहरुमा हुने विभिन्न किसिमका संक्रमणहरु हुन्, जुन असुरक्षित यौनसर्म्पर्कको माध्यमबाट एकव्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा र्सर्ने गर्दछ । एचआईभी संक्रमण भनेको मानिसको रोगप्रतिरोध क्षमता कमजोर पार्ने भाइरसको संक्रमण हो, जो यौनसर्म्पर्कको साथै, असुरक्षित रगतबाट र्सन सक्छ ।
May 14, 2009 Posted by ramkeshar | Sex	| Leaveacomment